Soomaali taariikh naadir ah ka sameeyay gudaha wadanka Norway
Jilaagaan 29-sano jir ah ayaa kalsooni weyn ka qaba in uu kusoo bixi doono shaqadiisa cusub.
OSLO, Norway – Khaalid Maxamuud oo ah 29-sano jir ayaa wuxuu noqdey Soomaaligii ugu horeeyay ee ku biira Akadeemiyada Filimaanta ee fadhigeedu yahay magaala madaxda dalka Yurub ku yaala Norway ee Oslo.
Jilaagaan ku barbaaray degmadda Søm ee magaalada Kristiansand ayaa kalsooni weyn ka qaba in uu kusoo bixi doono shaqadiisa cusub.
Bogga maxaliga ah balse afka dheer ee Fvn.no oo warbixin ka qoray sheekadan ayaa ciwaan uga dhigay "Khaalid wuxuu maqaarkiisa u arki jiray kalar dhiiragelin u ah. Hadda wuxuu u maleynayaan in ay tahay caqabad".
Shaqada uu shirkada Kilden ka helay Khaalid oo ka qalin-jabiyey Theater College ayaa qandaraaskeedu dhamaanayaa sanadka 2021-ka.
Shirkada shaqaaleysiisay ayaa horey waxay u wajahdey eedeymo ku saabsan in ay howlwadeenadu ku yar yihiin dadyow kala midab ah.
Kilden oo ah mashruuc ay si wadajir ah isaga kaashadaan Kilden Teater, Kristiansand Symphony Orchestra iyo Opera Sør ayaa Filimiinta iyo Ruwaayadaha ay sameeyaan waxaa lagu soo bandhigaan masrxayo u gaara.
Filimaanta uu kasoo muuqdey Khaalid Maxamuud waxaa kamid ah; Memory 3+ iyo No Man Is An Island oo labadooduba soo baxay 2017-kii.
Norway ayaa ku jirta wadamada aadka u soo dhaweeyay Soomaalida waddankooda uga qaxay colaada sokeeye kuwaasoo qaxooti ahaan u tegay dalkaas, waxaana kamida ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre.
Kenya oo farta ku fiiqday dalalka "hurinaya" xiisada Soomaaliya
Afrika 16.06.2019. 13:35
Xukuumada Nairobi ayaa "qorsheyneysa" cabasho ay ka gudbiso wadamadaasi.
Muxuu Khayre kala hadlay Wasiirka Arrimaha dibadda Norway?
Soomaliya 19.06.2018. 01:09
Su'aallo ka dhashay socdaalkii wasiir Ine Marie ee Muqdisho
Soomaliya 11.06.2019. 00:08
Khayre oo diblomaasiyiin reer galbeed ah kula kulmay Muqdisho [Sawirro]
War Saxaafaded 31.01.2019. 17:19
Wasiirada Soomaaliya oo ansixiyey heshiisyo lala galay Qadar
Soomaliya 13.06.2019. 20:29
Waqtiga ay dib u bilaabanayaan fadhiyada BF oo la mudeeyay
Soomaliya 08.06.2019. 19:40
A Madoobe iyo Xaaf oo "xoojiyey" iska caabinta cadaadiska Villa Somalia
Soomaliya 05.06.2019. 16:08
Weerar ka dhacay Afmadow iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 30.05.2019. 12:05
Weeraro ka dhan ah saldhigyada Mareykanka ee Afrika oo laga digay 28.10.2020. 09:54